Shandisa muturikiri chiriporipo muturikiri: Smartphone kana zvishandiso kutenga ulator Emulator.online ▷ 🥇
Patinoenda kunze kwenyika, dambudziko hombe hapana mubvunzo mutauro wekunze: kunyangwe hazvo munhu wese achitaura Chirungu zvishoma, tinogona kuzviwana zvakaoma kuzviita kuti tinzwisiswe nevanhu vekuno, kunyanya kana vachitaura zvavo chete. rurimi. Neraki, tekinoroji yekududzira yauya nenzira refu mumakore apfuura uye zvinogoneka, nemidziyo midiki inotakurika tora chiriporipocho uye nekukurumidza kududzira apo isu tichitanga hurukuro.
Muchirongwa ichi tinokuratidza zvechokwadi vashanduri venguva pfupi kuti iwe ugone kutenga online kuitira kuti iwe ugone kutaura uye kududzira mumutauro wemuno uye zvinopesana terera kune dialogues evatipinduri vedu uye unzwisise izwi rega rakataurwa. Midziyo iyi inobatsira uye inoshanda uye inogona kushandiswa kune chero rwendo rwekunze.
VERENGA ZVIMWE: Duramazwi rakanakisa remitauro yakawanda uye mushanduri weApple ne iPhone
Vashanduri vapamoyo ipapo
Vashanduri vepakarepo vane zvakasiyana siyana zvinoshanda uye, usati watenga modhi yekutanga yatinowana ipapo, zvinofanirwa kukosha kutarisa hunhu hunofanira kuve nemidziyo iyi, saka sarudza chete mamodheru anoenderana nezvatinoda. shanduro inoda.
Yechokwadi-yenguva basa muturikiri
Mushanduri akanaka wepakarepo anofanira kuve neanotevera hunhu kuti atsanangurwe seizvi uye agone kupindura pane zvese zvatinoda pakuturikira:
Mitauro yakatsigirwa- imwe yemipimo yakakosha, sezvo paine vashanduri vazhinji vakasiyana vanowanikwa ipapo uye tinofanirwa kusarudza imwe inotsigira zvirinani mitauro kana mitauro inonyanya kuzivikanwa yatingave nezvinetso nayo patiri kunze kwenyika. Saka ngativei nechokwadi chekuti inotsigira Chirungu, Spanish, French, Russian, Chinese, Japanese, Hindi, uye Portuguese.
Nzira dzekushandura- Pamusoro pemitauro yakatsigirwa, ngativei nechokwadi chekuti mushanduri akasarudzwa ipapo ane nzira dzakasiyana dzekushandura. Icho chakareruka kushandurwa kwemitsetse (kubva pamutauro A kuenda kumutauro B kana zvinopesana), nepo mhando dzinodhura uye dzepamberi dzichitendera kushandurwa chiriporipocho mumitauro miviri, pasina kumanikidza mabhatani kana kuseta mitauro pamberi pehurukuro (bidirectional translation) .
Kubatana: kuti vakwanise kududzira zvine hungwaru uye nekukurumidza, ruzhinji rwevashanduri vanofanirwa kunge vakabatana neInternet, kuti vabatsirwe neinjini dzekushandura dzepamhepo nehungwaru hwekunyepedzera hwakagadzirwa nevagadziri vemidziyo iyi. Mhando dzakareruka dzinobatana neBluetooth kune iyo smartphone (iyo inofanirwa kugara ichibatana neInternet), nepo mamwe mamodheru anodhura ane Wi-Fi, Bluetooth uye SIM kadhi yakatsaurirwa kuti ikwanise kubatana yakazvimiririra mune chero mamiriro.
Autonomy: sezvo izvi zviri zvishandiso zvinotakurika, zvine bhatiri remukati-lithiamu-ion, rinokwanisa kuvimbisa kanenge maawa mashanu kusvika matanhatu ekushandura risati radzikwa zvachose. Mune ino kesi, zvakakosha kuti ugare uchitakura inoenderana USB charger kana, sezvo isu tiri kunze kwenyika, zvakare ine powerbank yehukuru hwakaringana (senge iwo anoonekwa mugwara Maitiro ekuchengeta yako smartphone inogara ichichaja).
Kukura uye chimiro- Chimiro uye saizi yemududziri yakakoshawo, sezvo muturikiri wepakarepo achifanira kuve nyore kubata uye zvakareruka kuvhura nekuvhara pazvinenge zvichidiwa. Kunyangwe hazvo zvigadzirwa zvakasiyana zvine maumbirwo akasiyanasiyana zviripo, isu tinogara tichiedza kunongedza mamodheru ane ergonomic chimiro (muchimiro chevanyori vezwi).
Kana michina ikaremekedza hunhu uhu, tinogona kuvavavarira nemeso edu akavharwa, chokwadi chemhedzisiro yakanaka.
Vaturikiri vaturikiri vaunogona kutenga
Mushure mekuona mashandiro anoita vashanduri vanokurumidza, ngatione pamwe chete izvo zvishandiso zvatinogona kutenga kuAmazon, iyo yakagara iri imwe yemabhenji eInternet e-commerce nekuda kwechivimbiso chayo chizere, icho chatinotaura nezvacho mugwara . Ivimbiso yeAmazon inodzosera mari yakashandiswa mukati memakore maviri.
Pakati pevashoma uye vashoma vashanduri venguva pfupi isu tinowana iyo Travis Kubata Go, inowanikwa paAmazon isingasviki € 200.
Ichi chishandiso chinogona kuturikira mitauro gumi nemashanu muchibidirectional mode (neshanduro dzinogona kuwanikwa mune isingasviki sekondi), ine Wi-Fi, Bluetooth uye data network ((kuburikidza neSIM) uye, kana yakabatana neInternet, inoshandisa huchenjeri hwemberi. chakagadzirwa gore mhando kutibatsira neshanduro munguva chaiyo. Muturikiri uyu anofambidzana ne 155-inch touch screen uye akati wandei makiyi ekushandisa kusarudza mutauro waungashandure.
Mumwe mushanduri akanaka wepamoyo watinogona kufunga ndeye Smart Vormor Mushanduri, inowanikwa paAmazon isingasviki € 250.
Ichi chishandiso chine ergonomic uye compact chimiro, 2.4-inch color screen uye yekumashure kamera, kuti tikwanise kumisikidza nekushandura kunyangwe mapepa uye mameseji atinogona kuwana mumigwagwa yenyika yekunze. Kutenda kune isina waya kubatana, iyo inobvumira ipapo uye bidirectional dudziro inosvika kumakumi mashanu emitauro, iine chokwadi chinovhiringidzika.
Kana, kune rimwe divi, isu tiri kutsvaga vashanduri vepamberi vakachengeterwa vatengi vebhizinesi, chishandiso chekutanga chekutarisa ndicho Basque Mini 2, inowanikwa paAmazon isingasviki € 300.
Iyo dhizaini inoyeuchidza yechizvarwa chakapfuura Apple iPod Minis, uye kuti ive nyore kutakurika, inouyawo neyakagadzikana kesi, kuti iwe ugare uchiitora pamwe nesu usingatyi kukuvara kana kurasikirwa. Semuturikiri, inotsigira inosvika pamitauro makumi mashanu, inopa bidirectional modhi modhi uye inokwanisa kubatana kune chero nharembozha yedhata yemahara, chero kupi zvako pasi (nekuda kwezvibvumirano zvemugadziri, izvo zvinovimbisa kupinda kuburikidza neLTE).
Kana, pane kudaro, isu tiri kutsvaga compact uye inoshanda maviri-nzira dudziro chishandiso senge mahedhifoni, isu tinogona kutarisa kune chepamusoro-kumagumo chigadzirwa. WT2 Uyezve, inowanikwa paAmazon isingasviki € 200.
Aya mahedhifoni anoyeuchidza maApple AirPods asi anoshanda sevashanduri vemabhidirectional uye epasirese, akazadzwa nechishandiso (kuiswa kune yedu nhare mbozha). Kana uchinge wabatana neyakavimbika purogiramu yekushandura, zvese zvaunofanirwa kuita kupfuudza ruoko kune watinotaura naye uye kutanga kutaura kune imwe nhare: tinogona kutaura nerurimi rwedu, mumwe munhu achazotinzwisisa, uye tinogona zvakare kunzwisisa zvese. anoti. Uyu mushanduri anoyevedza anotakurika anodudzira kusvika pamitauro makumi mana dzakasiyana nemataurirwo makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, saka iwe unogona zvakare kunzwisisa nhaurirano dzemamwe matunhu enyika yakasarudzwa.
Shandisa yako smartphone semuturikiri-wenguva-chaiyo
Pasina kutenga chero chinhu, unogona zvakare kushandisa iyo Google Dudziro chaiyo-nguva muturikiri maitiro inguvai futi yakabatanidzwa muGoogle Mubatsiri iyo yave kuwanikwa pane Android uye iPhone zvishandiso. Shanduro iyi inotsigira mitauro makumi mana nemana yekusarudza, kusanganisira chiArabic, Chirungu, ChiFrench, ChiGerman, ChiGiriki, Chiitaliya, Chijapani, ChiPutukezi, ChiSpanish, nemimwe yakawanda. Kana muturikiri yashandurwa, unogona kungotaura muchigadzirwa kuti shanduro iratidzwe pachiratidziri uye uverenge zvinonzwika neGoogle Mubatsiri, kuti ugone kutaura nevanhu vanotaura mitauro yakasiyana.
Maitiro ekumisikidza muturikiri maitiro eGoogle Mubatsiri
Pafoni yako, vhura Google Assistant nekutaura "Ok Google" kana nekuvhura Google app nekukanda bhatani remakrofoni mubhawa rekutsvaga. Kutanga muturikiri maitiro, ingoti "Mhoroi Google, iva muturikiri wangu weRussia"kana mutauro waunoda. Unogona zvakare kushandisa mimwe mirairo yezwi seiyi:"Ndibatsireiwo kutaura Spanish"kana"Kududzira kubva kuRomania kuenda kuDutch"Kana zvakapusa:"Muturikiri wechiFrench"KANA"Shandisa muturikiri maitiro".
Tevere, mubatsiri anokukumbira kuti utore bhatani remaikorofoni wotanga kutaura. Pachiratidziri unogona kubva waverenga iko kushandurwa uye nhevedzano yemhinduro mumutauro wakashandurwa kuti urambe uchitaura zvakanaka.
Kusvikira makore mashoma apfuura, vashanduri vepasirese vaive vechokwadi sainzi ngano, nepo nhasi vatengwa zviri nyore kuAmazon uye vanoshandawo mushe, vachitibatsira kukurira mutauro wedziviriro kana tichienda kunze kwenyika.
Nguva dzose pane nyaya yevashanduri, tinokurudzira kuti iwewo uverenge gwara redu Mashandisiro ekushandura izwi uye mushanduri panguva imwe chete.
Tiri kutsvaga muturikiri-nzira mbiri yeSkype? Tinogona kushandisa muturikiri akabatanidzwa, sezvinoonekwawo mugwara redu. Skype Mushanduri se otomatiki odudziro odhiyo muizwi nevhidhiyo chat.
Zvirinani PC kana PS5 / Xbox dzakateedzana kutamba?
Maitiro ekutamba mitambo yePS5 pasina koni
7 zvakakosha zvishongedzo zve smart basa
Saka dzakawanda nzira dzekushandisa Mac Mini sePC, TV Bhokisi uye NAS
Yakadii PS5? kuongorora uye gwara reiyo nyowani Playstation
Huawei vs Xiaomi: ndiani anogadzira akanakisa mafoni?
Iwo akanakisa ese-mu-one maPC anotora nzvimbo diki
Ungasarudza sei komputa yako kuchikoro kana kukoreji
Magirazi ane bluetooth odhiyo, yemagirazi ezuva uye kwete
Iwo akanakisa desktop PC ekutenga kunze kwebhokisi